Guangxi takes various measures to better fight against novel coronavirus (1/8)
2020-02-10 09:15:38 Xinhua Editor :Jing Yuxin
Railway staff members prepare to disinfect bullet trains in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Feb. 6, 2020. Since the outbreak of the novel coronavirus, Guangxi has taken various measures, including enhancing the virus prevention publicity and expanding medical supplies production, to better fight against the epidemic. (Xinhua/Lu Boan)
Railway staff members disinfect a bullet train in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Feb. 6, 2020. Since the outbreak of the novel coronavirus, Guangxi has taken various measures, including enhancing the virus prevention publicity and expanding medical supplies production, to better fight against the epidemic. (Xinhua/Lu Boan)
A staff member measures body temperatures for passengers near a highway toll station in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Feb. 1, 2020. Since the outbreak of the novel coronavirus, Guangxi has taken various measures, including enhancing the virus prevention publicity and expanding medical supplies production, to better fight against the epidemic. (Xinhua/Lu Boan)
A staff member guides cars to stop by road to measure body temperatures for drivers near a highway toll station in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Feb. 1, 2020. Since the outbreak of the novel coronavirus, Guangxi has taken various measures, including enhancing the virus prevention publicity and expanding medical supplies production, to better fight against the epidemic. (Xinhua/Lu Boan)
Workers make medical isolation gowns at a biotechnology company in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Feb. 3, 2020. Since the outbreak of the novel coronavirus, Guangxi has taken various measures, including enhancing the virus prevention publicity and expanding medical supplies production, to better fight against the epidemic. (Xinhua/Lu Boan)